लुम्बिनीका चार हजार पदको नतिजाः कांग्रेस पहिलो हुँदा एमाले र माओवादीको अवस्था के ? - Sankalpa Khabar
लुम्बिनीका चार हजार पदको नतिजाः कांग्रेस पहिलो हुँदा एमाले र माओवादीको अवस्था के ?
१० जेष्ठ १२:३४
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ पालिकाबाट चार हजार ९३६ जनाको नतिजा आएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्मको नतिजामा नेपाली कांग्रेस अग्रस्थानमा रहँदै करिब १९ सय पदमा विजयी हासिल गरेको छ भने एमालेले १६ सय पद जितेको छ । माओवादी केन्द्र ८ सय पदमा विजयी भएको छ ।
आयोगका अनुसार नेपाली कांग्रेसले प्रमुख १८, अध्यक्ष २७, उपप्रमुख ११, उपाध्यक्ष ३२, वडाअध्यक्ष ३५९, महिला सदस्य ३५५, दलित महिला सदस्य ३६६ र खुला सदस्य ७२८ जितेको छ । यो दलका सबै पद जोड्दा १८ सय ९६ स्थानमा जित हासिल गरेको छ ।
नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० ले वडाअध्यक्ष चार, महिला सदस्य तीन, दलित महिला सदस्य दुई र खुला सदस्य सात जितेको छ । सो दलको सवै पद जोड्दा १६ जित हासिल गरेको छ ।
२० असार ०७:४९
२० असार १३:४६
१९ असार १४:०८
२० असार ०७:५८
२२ असार १६:१९